နော်ဝေ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့ ပူးပေါင်း၍ ရေးမြို့မှ ကျောင်းသား၊ ကေ?? - Yangon Media Group
နော်ဝေ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးတို့ ပူးပေါင်း၍ ရေးမြို့မှ ကျောင်းသား၊ ကေ??
ရေး၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင် အားဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးနှင့် မွန်ပြည်နယ် (NRC-Norwegian Refugee Council၊ နော်ဝေလူမှု ကူညီရေးအဖွဲ့) တို့ ပူးပေါင်းပြီး ယခုနှစ်တွင် အခြေခံပညာကျောင်းများရှိ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် နိုင်ငံသားကတ်ရရှိရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးမြို့နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
NRC အနေဖြင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်မှစတင်ခဲ့ပြီး မွန်ပြည်နယ်သို့ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် တွင် ရောက်ရှိလာကာ ရေးမြို့နယ်အပါအဝင် လမိုင်းမြို့၊ ခေါဇာမြို့ နှင့်ကျိုက်ထို၊ သထုံ၊ ဘီးလင်းမြို့ နယ်များအတွင်း နိုင်ငံသားကတ်ရရှိ ရေးလုပ်ငန်းများတွင် လဝကနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ”သူတို့က ဘာတွေပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လဲဆိုတော့ ပြည်သူတွေ ကုန်ကျမယ့်ဓာတ်ပုံဖိုး၊ သွေးစစ် ဆေးခ၊ မိတ္တူကူးပေးခြင်းလုပ်ငန်း တွေ ဆောင်ရွက်ပေးတယ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားပလတ် စတစ်လောင်းပေးတယ်၊ အဲဒီကုန် ကျစရိတ်တွေအားလုံးကို ပြည်သူလူထုအတွက် ကျခံပေးတယ်။ အခုသူတို့ကိုခေါ်တယ်ဆိုတာက ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ အခမဲ့ပညာရေးစနစ်ကျင့်သုံးနေကြတဲ့အခါမှာ ဝန်မပိစေချင်ဘူး၊ အခမဲ့ရတဲ့ NRC နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် မိဘတွေစရိတ်စက သက်သာစေတယ်”ဟု ရေးမြို့ နယ် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးမှူး ဦးမျိုးခိုင်က ဇန်နဝါရီ ၁၉ရက် တွင် ပြောကြားသည်။
ရေးမြို့နယ်တွင် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း NRC နှင့် ပူးပေါင်းကာ အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း ၄၆ ကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း ၂၇၉ဝ အားလည်း ကောင်း၊ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ငါးခုမှ ပြည်သူ ၂၇ဝ အား လည်းကောင်း နိုင်ငံသားကတ်ရရှိ ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကျိုက်ထီးရိုး တောင်ပေါ်တွင် တစ်ရက် အမှိုက်ငါးတန်ခန့် ထွက်ရှိနေ၍ အမှိုက်ပြဿနာကို အားလုံး ပူးေ??
စက်မှုဥယျာဉ် (မြို့သာ) စီမံကိန်းတွင် တရုတ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၉ဝ
ပဲဈေးကွက်တွင် နည်းမှန်လမ်းမှန် ရောင်းဝယ်ကြရန်နှင့် ဈေးကွက် တည်ငြိမ်ရေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် ထိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ငါးနှစ်တာ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း ရေးဆွဲနေ
လုပ်ငန်းကို ထူးခြားစွာ ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ၀န်ကြီးချုပ်ပုံကို ကြော်ငြာဘုတ်တွင် အသုံးပြ?